Shabakadda Amiirnuur – Page 36
DEGDEG: Gaari Ay Saarnaayeen Askarta DF oo Qarax Lagula Helay Ceelasha Biyaha.
Qarax xooggan ayaa duhurnimadii maanta deganaaka Ceelasha Biyaha lagula beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa DF, kaasoo sababay khasaarooyin kala duwan. Gaariga oo ahaa nooca raaxada ayuu gabi ahaanba qaruxu burburiyay, waxaana dhimasho iyo dhaawac aad u liita ku noqday askartii saarnayd. Ciidamo kale oo gurmad ah oo […]
Ciidamada Kenya oo Kismaayo Gaari Gaashaaman Ku Jiirsiiyay Askari Soomaali Ah.
Ciidamada Kenya oo kamid ah shisheeyaha heystay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ayaa si xun gaari Beebe ah u jiirsiiyay askari ka tirsan ciidanka Jubbaland. Askarigan oo wadada taagnaa si uu iyaga ugu sii sugo ammaanka ayay taayarka Beebaha marsiiyeen walibana ku jiideen sida laga dheehan karayo sawirro iyo […]
Video+Sawirro: Alkata’ib Oo Filim Kasoo Saartay Weerarkii Ciidamada AMISOM Lagula laayay ee Ka Dhacay Duleedka Balcad.
Mu’asasada Alkata’ib ayaa faafisay Filim xiisa badan oo lagusoo bandhigayo dagaalkii taariikhda galay ciidamada shisheeyaha Burundi ku qabsaday duleedka degmada Balcad ee Sh/Dhexe. Video-ga oo la daawan karo qadar hal saac ah ayaa banaanka soo dhigaya jabka iyo halaagga ciidamada AMISOM kasoo gaaray weerar dhabbagal ahaa oo bishii Maarso ee […]
Shariif Xasan Oo Ku Dhawaaqay Inuu Is Casilay Kadib Cadaadis Soo Wajahay.
Hoggaamiyihii maamulka isku magacaabay Koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii madaxtinimo ee uu maamulkaasi ka hayay. Shariif Sakiin oo maanta gelinkii dambe shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa shaaciyay in uu iska wareejiyay xilka madaxweynaha ‘Koonfur galbeed’ islamarkaana uusan isku sharrixi doonin doorashada soo socota. […]
Ciidamada Maraykanka oo hormuud u ah shisheeyaha duulaanka gardarada ah ku jooga wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan ayaa ku kacay xasuuq wuxuushnimo oo aad u xanuun badan, kaas oo ay u geysteen shacabka muslimka ah ee ku nool wadankaas. Sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo wadanka Afqaanistaan, ciidamo Maraykan ah […]
Dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka socotay hay’adda kheyriga ee Al-Ixsaan, islamarkaana hoostagta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlo caafimaad oo muhiim ah waxay ka fuliyeen qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha hoose. Meelaha ay Dhakhaatiirtu tageen waxaa kamid ah Tooratoorow, halkaas oo ay ku daweeyeen inkabadan 300 oo ruux, oo isugu jira rag, […]
Kadib markii uu ay is casileen xubno ka tirsanaa guddiga doorashada, qaar kamid ah Odayaasha ku olloga ah Shariif Sakiin-na ay sheegeen ineysan dhici karin doorashada, ayay dowladda Federalku soo saartay hadal digniin ah oo arrintan ku saabsan. War kasoo baxa wasaaradda Arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu sheegay ineysan macquul […]
Daawo Sawirrada Dadki Ay Amisom Maanta Ku Gumaadeen Degmada Heliwaa.
Ciidamada shisheeye ee Amisim ayaa saaka aroortii hore degmada Heliwaa ku gumaaday dad shacab ah oo aanan waxba galabsan kuwaasoo u badnaa gaadiidley. Ugu yaraan 4 qof oo rag ah ayay ku toogteen nawaaxiga Ex. Control Balcad waxaana arrintan si aad ah uga xanuunsaday dadka degaanka oo aad u garanayay […]
Askar Ka Tirsan Amiosm oo Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in askartan uu qaruxu ku helay nawaaxiga Ekis Koontarool Balcad xilli ay kasoo laabteen xerada Maslax oo ay sahay ugu geeyeen ciidanka […]
Al-Shabaab oo Hub Ku Furtay Weerar Ka Dhacay Shabeelaha Dhexe.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee wilaayada Shabeelaha dhexe ayaa weerar ku qaaday askar taabacsan Hir-shabelle kuwaasoo ay khasaare kala duwan u geysteen hubna kasoo furteen. Weerarka ayaa waxa ay ku qaadeen ciidamo ku sugnaa Tuulada Miir-Taqwo lagu magacaabo xilli ay doonayeen iney dhac u geystaan dadka shacabka ah, waxaana laga […]